Fanonganam-panjakana Tao Burkina Faso : Fanontaniana 3 Sy Ampaham-baliny Mahakasika ireo Mpanongana, Ny Tanjony Ary Ny Fanoheran’ny Olompirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2015 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 繁體中文, 简体中文, Français
Sarin'ny fihetsiketsehan'ireo olompirenena tao Burkina Faso (loharano samihafa tao amin'ny Facebook)
Hatramin'ny 16 Septambra 2015 , nampiditra indray an'i Burkina Fasso ho ao anaty olana politika lalina ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila avy amin'ny Rezimanta mpiaro ny filoham-pirenena (RSP). Araka izany, hatramin'ny 16 Septambra dia tazonin'ny RSP, mpiambina fahiny tao Prétoria fony i Blaise Compaoré no filoha, ny filoha Michel Kafando, sy ny praiminisitra, Isaac Zida ary ireo mpikambana ao amin'ny gvernemantany ary noravàny ny ampitson'io ireo andrim-panjakana rehetra tamin'ny tetezamita (ny 18 Septambra no navotsotra ny filoha Kafando sy ireo minisitra). Tao anatin'izany dia notendren'ireo miaramila mpanongana fanjakana ho toy ny mpitondra vaovao ao amin'ny firenena ny jeneraly Gilbert Diendéré, tanàn-kavanan'i Blaise Compaoré fahiny, .
Nitranganà fifandonana tao Ouagadougou renivohitra, nahafatesana farafahakeliny olona telo ary naharatrana 60.
Manomboka hita tsikelikely amin'ny zava-mitranga sy ireo mpanatontosa azy ary ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpitondra fanjakana fahiny ny tanjon'ity fanonganam-panjakana ity. Toy ny tsy vonona mihitsy ny hihemotra amin'ny fakàna ny fahefana iretsy farany, na teo aza ny filazana fahavononana nasehon'ny vahoaka Borkinabe tamin'ny 2014 izay nitroatra nandà ny fanitàrana ny fitondràn'i Blaise Compaoré izay notsaraina ho tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana. Io hetsika io, nantsoina hoe kifafan'ny vahoaka, no mbola mitarika indray ny fanoheran'ny vahoaka an'ireo miaramila mpanongana fanjakana.
Na inona ho vokatr'ity fanonganana ity ao anatin'ny fotoana fohy na antomotr'ezaka, dia efa fanohintohinana indray ny fanehoana fahavononana hamerina maharitra ny demaokrasia ao amin'io firenena io aloha izany. Mba hahatakarana tsara ny vanim-potoana isian'ny olana Borkinabe, misy ampahana valinteny 5 ireto momba ny fototr'olana, nomen'ireo mpisehatra ao an-toerana :
Iza ireo miaramila mpanongana avy amin'ny RSP ?
Andiany iray ao anatin'ny tafika ao Burkina Faso ny Rezimanta mpiaro ny filoham-pirenena (RSP), nomena andraikitra hiaro ny filoha ao Burkina Faso, ireo andrim-panjakana rehetra ary ireo olona notendren'ny filohan'i Faso. Noforonin'i Blaise Compaoré ny 21 novambra 1995 mba hanamafisana ny fahefany taorian'ny famonoana an'i Thomas Sankara, nomena fitaovam-piadiana arifomba tokoa ny RSP ary mahaleotena tsy miankina amin'ny fibaikona miaramila rehetra fa eo ambany fifehezana mivantan'ny filoham-pirenena. Ny 14 Septambra, sosokevitry ny iray amin'ireo andrim-panjakan'ny tetezamita, ny kaomitin'ny fampihavanana sy ny fanavaozana (CRNR) ny handravàna ny Rezimanta mpiaro ny filoha. Efa tafiditra lalina tamin'ilay fanonganana voalohany tamin'ny 15 Oktobra 1987 i Gilbert Diendéré, ilay lehilahy maherin'ny RSP izay lasa filoha mpisolo toerana fotsiny araka izany, fanonganana voalohany izay nitondra nankany amin'ny fahafatesan'i Sankara. Ny Jona 2015, efa notakian'ny RSP ny hialàn'ny praiminisitra, avy eo nihemotra tamin'ny fangatahany ry zareo. Napetrak'ireo miaramila mpanongana ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ary fanakatonana ny sisintany an-tanety sy an'habakabaky ny firenena.
Gilbert Diendéré, jeneralin'ny tafika ao Burkina Faso, nalaina tao amin'ny wikimedia commons CC-BY-20
Nahoana no tsy navela hitohy ny fivoaran'ny dingam-pifdianana efa niomanana ?
Tokony ho ny 11 Oktobra no natao ny fifidianana filohampirenena sy solombavambahoaka ao Burkina Faso. Manamarina ny fihetsiny tahaka izao i Gilbert Diendéré tao anaty tafatafa ho an'ny Jeune Afrique :
Antony tsy fandriampahalemana mialoha ny fifidianana no nirosoanay tamin'ny hetsika mba hanakanana ny fanozongozonana an'i Burkina-Faso
Toa tahaka ny fialàna bàla ihany anefa ilay filazàna ny mety hisian'ny fanozongozonana nampiasain'ny RSP, izay mikendry amin'ny alàlan'izao saritaka izao hamerina amin-kery indray ny fitondrana teo aloha ho amin'ny toerany. Sady izao koa, voahilika tsy ho ao anatin'ireo fifidianana ho avy ireo mpomba fahiny an'i Compaoré. Fanampin'izany, mba hahatakarana ny famonoana azy dia ny 17 Septambra, andro nisian'ilay fanonganana, no tokony hamoahana ny vokatry ny – autopsie- fitsirihana ny vatana mangatsiakan'i Sankara.
“Fahafatesana” fanindroan'i Thomasa Sankara izao no atrehana, izay angamba mety ho ireo nanatontosa ny taloha ihany no nanao azy, izay tsy hiafina amin'ny vahoaka Borkinabe rahateo ny andraikiny tamin'izany.
Afaka hifanohitra ela amin'ny herin'ny RSP ve ny fanoheran'ireo olompirenena ?
Fihetsiketsehana tao Burkina Faso taorian'ny fanonganana fanjakana – sary avy amin'ny lahatsarin'i Elisée Antoine
Singa fototra iray ho an'ny fitroaram-bahoaka ny 30 Oktobra 2014 teo ny hetsika kifafan'ny vahoaka nentanin'ireo tanora tao Burkina, hetsika nampiongana an'i Compoaré. Tamin'io andro io, an'aliny ireo mpanao hetsi-panoherana no nirotsaka an-dalambe tany amin'ny manodidina an'i Ouagadougou sy ireo tanàn-dehibe hafa ary nizotra ho any amin'ireo tranobem-panjakana. Taorian'ny fanambaràna ny fisian'ilay fanonganana tamin'ny 16 Septambra, nisy fihetsiketsehana tsy nasiam-piomanana fa avy hatrany dia nipoaka tany amin'ireo arabe tao an-drenivohitra. Fampielezampeo iray, Radio de la Résistance Citoyenne, (Fampielezampeon'ny Fanoheran'ny Vahoaka) no noforonina hanetsehana ireo mpikatroka mafàna fo manohitra ny fitondran'ny RSP. Any amin'ireo tambajotra sosialy, ny tenifototra #lwili, no manangona ireo vaovao rehetra momba ilay krizy sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny vahoaka. Ireto ny sary vitsivitsy sy ny fanehoankevitra naterak'ity krizy vaovao ity :
Androany vao maraina tao #Ouahigouya !
Aiza ny tafika ara-dalàna eto amin'ny firenena? Aiza ny zandary? inona no ilàna azy ireo raha tsy hahavita hanohitra mpampihorohoro?
Fanonganana fanjakana ao Burkina MT @Elmayci: Misaotra amin'ny fahanginanareo ry @AmbassadorPower @AmbassadorRice @fhollande fa dia maty izahay